याकूब – Word of Truth, Nepal
प्रभुको एक जना भाइको नाम या________ (मत्ती १३:५५) थियो। यिनी नयाँ नियमका पन्नाहरूमा धेरैपटक उल्लेख गरिका छन्। उहाँ बौरिउठ्नुभएपछि येशू एकपटक यिनीकहाँ छुट्टै देखा पर्नुभयो (१ कोरिन्थी १५:७)। अनि उनी यरुशलेमको मण्डलीका अगुवा बने (प्रेरित १५:१३, १२:१७)। साथै उनी “याकूबका पत्र” का मानवीय लेखक थिए (याकूब १:१)।
मर्कूस १०:२८ मा पत्रुसले भने, “हेर्नुहोस्, हामीले _____________‌_ कुरा त्यागेका छौं र तपाईंको पछि लागेका छौं।” के याकूबले पनि यस्तै गरेका थिए? _____________‌_। येशूले यस विषयमा मर्कूस १०:२९-३१ मा भन्नुभएको कुरा पढ्नुहोस्। जब मानिसहरूले ख्रीष्टका खातिर केही कुराहरू गर्छन्, तब के तिनीहरूले केही कुराहरू प्राप्त पनि गर्छन्?_____________‌_। तिनीहरूका हात रित्तिन्छन् कि भरिन्छन्? _____________‌_। ख्रीष्टको पछि लाग्ने व्यक्तिले अहिले यहि जीवनमै प्राप्त गर्छन् कि आउनेवाला जीवनमा मात्रै प्राप्त गर्छन् (मर्कूस १०:३०)? ___________‌______________‌__ ____________‌______________‌______________‌___________
जब एक व्यक्ति ख्रीष्टियान बन्दछ, के त्यहाँ त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् जसलाई उनले छाड्छन् वा त्याग्छन्? के कस्ता कुराहरू? विश्वासीले “गुमाउन” सक्ने कुराहरू के कस्ता होलान्? विश्वासीले आउनेवाला जीवनमा के कस्ता कुराहरू प्राप्त गर्नेछन्? मुक्ति नपाएकाहरूले आउनेवाला जीवनमा के कस्ता कुराहरू गुमाउनेछन्? याकूबले ख्रीष्टका निम्ति सबै त्यागे तर उसलाई नोकसान भएन, बरु फाइदा भयो। आफ्नो जीवनको अन्तमा, उनले ख्रीष्टका निम्ति आफ्नो शिर समेत गुमाए, तर त्यसमा पनि उसलाई नोक्सान भएन बरु फाइदै भयो!
येशूले याकूब र यूहन्नलाई एउटा उपनाम दिनुभयो। उहाँले उनीहरूलाई बोअनर्गेस भनि बोलाउनुभयो। यसको अर्थ के हो (मर्कूस ३:१७)? _____________‌______________‌_। उहाँले उनीहरूलाई सम्भवतः उनीहरूको “आँधी-बेह्रीरुपी व्यक्तित्व” को कारण उक्त नाम दिनुभएको हो। गर्जनको कुरा गर्दा हामीलाई बिजुली चम्काइका साथ आकाशबाट चटयाङ बज्रँदै गरेको आँधी बेह्रीको सम्झना आउँछ। याकूब र यूहन्ना जोशिला थिए, कहिले त अति नै। कहिलेकाहीँ उनीहरू हडबडे पनि थिए जुन कुरा हामी यहाँ देख्नेछौं।
“गर्जनका पुत्रहरू” को विषयमा जान्नलाई हामी लूका ९:५१-५६ पढौं। येशू र उहाँका चेलाहरू यरुशलेतर्फ यात्रा गर्ने क्रममा, सामरीहरूको एउटा गाउँमा उनीहरूलाई राम्रो स्वागत गरिएन (लूका ९:५१-५३)। सामरीहरूले येशूलाई उचित व्यवहार नगरेकोमा कुन दुई चेलाहरू अति क्रोधित बने (लूका ९:५४)? ____________ _‌_________________
समस्या हल गर्न के उनीहरूले एक शान्तपूर्ण उपाए खोजे? _____________‌। यी “गर्जनका पुत्रहरू” ले _____________‌_ बाट _____________‌_ बर्साउने र तिनीहरूलाई _____________‌_ पार्ने इच्छा गरे (लूका ९:५४)। परमेश्वरले चटयाङ बर्साउनुभई उनीहरूलाई नष्ट गरेको उनीहरूले चाहे!
उहाँले उनीहरूलाई भन्नुभयो, “जाऊ, तिमीहरूले भने बमोजिम गर”
“गर्जनका पुत्रहरू” सित ठीक खालको आत्मा थिएन (लूका ९:५५)। उनीहरूसित एक रिसाहा, दोषारोपण गर्ने आत्मा थियो जसले प्रभुका शत्रुहरूलाई नष्ट र भस्म पार्न चाहन्थ्यो। ख्रीष्ट जुन कारण संसारमा आउनुभएको थियो त्यही नै बुझ्न सकिरहेका थिएनन्ः “किनभने मानिसका पुत्र मानिसहरूका प्राणहरूलाई _____________‌_ गर्न _____________‌_, तर _____________‌_ आएका हुन्।” येशूको उपाए बरु शान्तपूर्ण र कृपालु थियोः “अनि उनीहरू अर्को गाउँमा जानुभयो” (लूका ९:५६)।
के तपाईं कसैसँग रिसाएर त्यो व्यक्ति कतै खुत्रुकै भए हुन्थ्यो वा यस पृथ्वीबाट हटाइए हुन्थ्यो भनी कहिल्यै सोच्नुभएको छ? हुन सक्छ त्यो व्यक्तिले तपाईंप्रति नराम्रो व्यवहार गरेको थियो, अथवा कुनै गल्ती नै गरेको थियो। के तपाईंलाई थाहा छ, त्यो व्यक्तिप्रति समेत परमेश्वर कृपालु हुन चाहनुहुन्छ? के तपाईंलाई थाहा छ, परमेश्वर त्यो व्यक्तिप्रति अहिले नै भला र कृपालु हुनुहुन्छ (हेर्नुहोस् मत्ती ५:४३-४८)? त्यो व्यक्ति तपाईंको शत्रु नै होला, तर येशूले भन्नुभयो, “आफ्ना शत्रुलाई _____________‌_ गर” (मत्ती ५:४४)।
याकूब र यूहन्ना “गर्जनका पुत्रहरू” थिए। साथै उनीहरू “महत्वकांक्षाका पुत्रहरू” थिए। उनीहरू परमेश्वरको राज्यमा ठूला हुन चाहन्थे। उनीहरू सबभन्दा राम्रो स्थान ओगट्न चाहन्थे। राज्यका सम्पूर्ण मुख्य-मुख्य व्यक्तिहरू बसालिँदा, राजाको सबभन्दा नजिकका दुर्इ स्थानहरूमा उनीहरू नै बस्न चाहन्थे! याकूब र यूहन्ना दुई व्यक्तिहरू थिए जसलाई नम्रताको पाठ सिकाइनु साँच्ची नै खाँचो थियो!
मर्कूस १०:३५ मा उनीहरूको अनुरोधलाई विचार गर्नुहोस्। उनीहरू यसो भन्दै थिए, “प्रभु, हामी जे चाहन्छौं तपाईंले त्यही गरिदिनुभएको होस्!” कोही मानिसहरू यसरी नै प्रार्थना गर्दछन्। परमेश्वरको इच्छा खोज्नुको सट्टा, उनीहरू आफ्नै इच्छा परमेश्वरले पुरा गरिदिनुभएको होस् भन्ने चाहन्छन्! उनीहरू चाहन्छन्, परमेश्वर उनीहरूको दास हुनुभएको, उनीहरूको इच्छाअनुसार सबथोक गरिदिनुभएको! के येशूले उनीहरूले जे चाहन्छन् त्यहीअनुसार गरिदिनुहुने प्रतिज्ञा गर्नुभयो (मर्कूस १०:३६)? _____________‌_। उनीहरूको अनुरोध के थियो (मर्कूस १०:३७)? _____________‌____ __________‌_______________________‌_____‌______________‌______________‌_। याकूब र यूहन्नाकी एउटी आमा थिइन् जसको पनि उक्त अनुरोध गरिनुमा हात थियो (मत्ती २०:२०-२१)। उनले आफ्ना छोराहरूका निम्ति विशेष मान र स्थानको अनुरोध गरिन्!
प्रभुका सबभन्दा निकटवर्ती चेलाहरूमध्ये याकूब एक थिए। प्रभुका धेरै चेलाहरू थिए। लूका १०:१ मा सत्तरी चेलाहरूको उल्लेख छ। केही चेलाहरू अरुभन्दा बढी प्रभुको नजिकमा थिए। समय-समयमा प्रभुले कुनै-कुनै चेलाहरूलाई कुनै कुराका लिगि अलग गर्नुहुन्थ्यो जसमा अरुहरू सहभागी हुन सक्दैनथे। यधपि येशूका धेरै चेलाहरू थिए, उहाँले तीमध्ये बाह्र जनालाई विशेषरूपमा आफूसँग हुनलाई बोलाउनुभयो (लूका ६:१३)। समय-समयमा यी बाह्रमध्येबाट येशूले तीन जनालाई छानेर आफूसँग लाने गर्नुहुन्थ्यो। यी तीन जनाले केही यस्ता कुराहरू गर्न पाए जो अरु नौ जनाले पाएनन्। तलको चित्रले चेलाहरूको विभिन्न “घेराहरू” देखाउँदछ। के याकूब भित्री घेरामा पर्ने चेलामध्येका थिए (लूका ९:२८)? _____________‌_।
हामीले यो बिर्सनुहुन्न कि तरवारले याकूबको जीवनलाई अन्त गरेन, केवल उनको पार्थिव अस्तित्वलाई मात्रै अन्त गर्यो। तरवारले शारीरिक मृत्यु ल्याएकै क्षण याकूब “_____________‌_ बाट अलग भए” र “_____________‌_ सित” रहन पुगे (२ कोरिन्थी ५:८)। उक्त परिवर्तन याकूबका लागि फाइदाजनक थियो कि नोकसानीपुर्ण थियो (फिलिप्पी १:२१,२३)? _____________‌_।
याकूब असल र खराब दुबै पक्षहरू भएका मानिस थिए। कुनै बेला उनी जोसमा गर्जनका पुत्र हुन्थे जसलाई सेलाउन र नम्र आत्मा पहिरन खाँचो पर्थ्यो। उनमा महत्वकाँक्षा र घमण्ड थियो र येशूले उनलार्इ नम्रता र साँचो महानताको पाठ सिकाउनु आवश्यक पर्यो। याकूबले ख्रीष्टलाई भक्तिसाथ पछ्याए, आफ्नो मालिकलाई पछ्याउन सब परित्याग गरे। उनी आफ्नो प्रभुको नजिक रहिरहे र “भित्री घेरा” मध्येका एक थिए। उनले अन्तसम्मै विश्वासयोग्य हुँदै प्रभुको सेवा गरे र बाह्र चेलाहरूमा सबभन्दा पहिला मारिएर ख्रीष्टको उपस्थिति र आनन्दमा प्रवेश गरे। याकूबको जीवनको विचार गर्दा, के तपाईं यस मानिसमा आफैंलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ? आज आफ्नो जीवनलाई विचार गर्दा, के तपाईं याकूबलाई आफैंमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ? उनका कुन-कुन असल पक्षहरू तपाईंसित पनि छन्? उनका कुन-कुन कमजोर पक्षहरू तपाईंसित पनि छन्?
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 18:16:032020-04-28 14:39:42याकूब